Social Influencer တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုကျင့်ဝတ်တွေကို စောင့်ထိန်းရမလဲ
28 May 2019 . 5:07 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Social Media ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးထွားကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အတူ အမုန်းစကားတွေ၊ သတင်းမှားတွေ၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်းတွေနဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေ မှိုလိုပေါက်လာတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ မှိုလိုပေါက်လာတဲ့အထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့အရာက Social Influencer တွေပါပဲ။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ Beauty ၊ Fashion ၊ Lifestyle ၊ Tech ၊ Food အပါအ၀င် တခြားသောကဏ္ဍမျိုးစုံမှာလည်း Social Influencer တွေ အများကြီးပေါ်ပေါက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့မှာ Follower အသင့်အတင့်ကနေ အများအပြားအထိ ရှိကြပြီး သူတို့ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်လို့ ဒါမှမဟုတ် အားကျအတုယူလို့ စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ လူငယ်များစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေ့ကတော့ Social Influencer တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုကျင့်ဝတ်မျိုးကို ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်လဲဆိ်ုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်နော်။
ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဘာသာရေးပါပဲ။ ကိုယ်ဟာ ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ့်ရဲ့ များစွာသော Follower တွေထဲမှာလည်း ဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည် ကိစ္စအ၀၀ကို ၀င်ရောက်ပါဝင်တာမျိုးနဲ့ ဘာသာရေးခွဲခြားတာမျိုးကစလို့ ဘာသာရေးဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုများကိုပါ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှပဲ လူတိုင်းချစ်တဲ့ Social Influencer ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
Social Influencer တစ်ယောက်က အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ သူမှသူနဲ့ ကြော်ငြာချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တွေ များပြားလာတာကို ပြေးလို့လွတ်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ၀င်ငွေရှာနေရတာ မှန်ပေမယ့်လည်း မှန်ကန်ပြီး ရိုးသားတဲ့ Honest Review မျိုးကို Follower တွေဆီ တင်ဆက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နာမည်လေး အတော်အတန်ရလာပြီးမှာ ကြော်ငြာတွေပဲ စွတ်တင်နေလို့ နာမည်ကျသွားတဲ့ Social Influencer တွေကို သာဓကအနေနဲ့ ရှေ့မှာ အများကြီး လေ့လာကြည့်ပါ။ ထုတ်ကုန်တွေဆိုလည်း ကိုယ်တိုင်သေချာစမ်းသုံးကြည့်ပြီးမှ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသာ ရွေးချယ်ကြော်ငြာစေချင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ဟာ အများပြည်သူရှေ့မှာ အားကျအတုယူစရာလူတစ်ယောက်အဖြစ် ထွက်ရပ်ချင်ပြီဆိုရင် အမုန်းစကားတွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ကျသင့်ပါပြီ။ မုန်းနေရင်လည်း စိတ်ထဲထားလိုက်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Follower များစွာ ကိုယ့်ကိုယ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Facebook ၊ Instagram နဲ့ Page တွေမှာ ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဟာ အလကားနေရင်း မုန်းတီးပုတ်ခတ်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်နယ်ပယ်အချင်းချင်းထဲကဆို အကြောင်းအရာကိုဖြစ်စေ၊ လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေ အမုန်းစကားဖြန့်ဝေလိုက်မိတယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဆိုးပါသေးတယ်။
စမတ်ကျတဲ့ Follower တော်တော်များများကတော့ Social Influencer တစ်ယောက်ရဲ့ သပွတ်အူကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေနဲ့ မိသားစုအရှုပ်တော်ပုံတွေကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ သူတို့စိတ်ဝင်စားတာက သင် Review ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ သင် စွဲစွဲမြဲမြဲအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီတော့ တစ်ခါတလေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာခံစားချက်တွေနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရှုပ်အထွေးတွေကို Social Media မှာ ဖြန့်ဝေဖို့ စဉ်းစားမိမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကို ပြေးသတိရပေးပါ။
ဒီလေးချက်ကတော့ Social Media မှာ အောင်မြင်ချင်တဲ့ Social Influencer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်သူမှ လာမတားပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ထားရှိရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ဘာမှမရှိဘဲ တစ်ရာဖိုးငါးပုဒ် Influencer အဖြစ်ခံမယ့်အစား ကျင့်ဝတ်ရှိရှိနဲ့ စမတ်ကျတဲ့ Social Influencer လေးတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အခရာပရိသတ်ကြီးတွေလည်း Social Influencer တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေထဲမှာ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြောပြသွားဦးနော်။
ရောဂါကို ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်သလိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကျဆုံး တရားခံ
by Ngul Ciin . 11 hours ago
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် မရိုးသွားမယ့် Stop Motion ကာတွန်းကားကောင်းတွေ
by Ngul Ciin . 15 hours ago
Full-Time လည်းလုပ်ရင်း အပိုဝင်ငွေ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ
by Moethae Say . 15 hours ago
ဘာပစ္စည်းမှမ၀ယ်ခင် မဖြစ်မနေစဉ်းစားသင့်တာ ဘာတွေလဲ
by Moethae Say . 18 hours ago
crazy mood swings girls have during period
by Naw Hsel Hte . 1 day ago
First Date မှာတင် မရှုံးနိမ့်သွားဖို့ရာ ဒါလေးတွေ မှတ်သားပါ